In-caaryada dhismaha leh miisaanka fudud.
Muuqaal dabacsan oo qaab-fure ah.
Suufka qalalan ee degdega ah.
10 hawo leh marin biyoodka gudaha.
Loo heli karo Magaalada, mootada iyo koofiyadda safarka.
Nooca alaabta Koofiyadda safarka magaalada
Lambarka Moodalka Koofiyadda magaalada VU103
Habka wax soo saarka EPS + PC-caaryada
Muuqaalka miisaan fudud, hawo-mareeno xoog leh, laba kombuyuutar oo gudaha ku jira, naqshadeynta moodada
Kordhi fursadaha Cirifka la saari karo
Koofiyadda VU103 waxay bixisaa taam raaxo leh iyo hawo furan oo naqshad ku habboon ku dhowaad raacid kasta, waxaa lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo dhismaha In-caaryada si loo yareeyo miisaanka iyadoo kor loogu qaadayo adkeysiga u taagan isticmaalka maalin kasta, koofiyadda magaalooyinka waxay ahayd muujinta qaabeynta iyo waxqabadka dhammaan noocyada fuushan. Ku waxyooday asalka, koofiyaddu waxay dib u qeexday jaangooyada waxqabadka. Ku dar raaxada, hagaajinta iyo socodka hawada sare ee nidaamka hawada, koofiyadduna waxay dib u sawireysaa waxa koofiyadu noqon karto.
Maro lagu dhex dhisay si qorraxda (ama roobku) wajigaaga looga ilaaliyo, markaa waxaad diiradda saari kartaa waxa ka horreeya, marada marada waxaa lagu tolay koofiyad suuf ah oo la jaan qaadi karta cabbirrada kala duwan ee kala goynta ah, muuqaalka waxaa lagu saari karaa velcros kaasoo ku dhegan koofiyadda dhexdeeda, macaamilku si fudud ayuu u beddeli karaa ama u dhaqi karaa muuqaalka.
Suufinta 'Dacron Polyester padding' waxay bixisaa dareemo aad u raaxo badan iyo awood qaboojiye heer-fasal ah, waxaan doorannaa cufnaanta ugu fiican ee xumbada si aan si buuxda ugu xirno madaxa oo aan marwalba diiradda saarno faahfaahinta khibrada macaamiisha, maadaama aan ogaanay koofiyado badan oo suuqa ku jira suufku wuxuu noqon karaa si fudud loo cadaadiyey.
Suunka koofiyada caadiga ah ee warshaddeena ayaa la kulma haynta iyo baaritaanka tijaabada ee EN1078, CPSC iyo AS / NZS: heerarka 2063-2020 si loo damaanad qaado amniga, waxaan sidoo kale soo bandhigi karnaa shabakado kala duwan oo leh feker, sublimation, antibacterial yarn-dun-dun leh tolmo wanaagsan leh.
Waxaan ku qalabeynay suumanka ITW iyo seddex-glides si aan u hubino isku xirnaanta ugu fiican, suunku waa loo habeyn karaa Fidlock magnet suunka haddii macaamilku u baahdo fursado dheeri ah.
Koofiyadda magaalada waxay leedahay muuqaal hubaal ah oo ah nidaam taam ah oo madaxaaga si raaxo leh oo ammaan ah u daboolaya, la yaab ma leh koofiyaddan inay sii ahaato mid loogu jecel yahay magaalada, raacista, mootada iyo fuulista magaalooyinka adduunka oo dhan. Nidaamka ku habboon ee la isku hagaajin karo oo leh jeeg dhexe ee diillin kaa dhigaya inaad doorato ku habboonaanta gacmaha, kaliya dabool toos ah oo aan hoos kuu dhigayn
Hore: Koofiyadaha magaalada baaskiil VU102
Xiga: Koofiyadda wadada VC301
Koofiyadda Baaskiilka Safarka ee ugu Fiican
Koofiyad Baaskiil Bluetooth ah
Koofiyad Baaskiil Laabi Laabi Karo